Labbo Canug Oo Mataana Ah Haddana Kala Aabe Ah! |
Waa Simon iyo Graeme oo la sawiran hooyada ilmaha u dhashay ee Meg Stone, iyo waliba carruurtooda
Waxay ka mid yihiin labadan aabe lamaanayaal aad u tiro yar oo Britain ku sugan kuwaasi oo doortay bacrimin lagu sameeyo barnaamijka isku darka ugxaanta iyo biyaha ragga.
Hannaankan ayaa muddo qaatay wuuna adkaaday, si loo bilaabana waxay u baahdeen in mid walba uu keeno ugxaan gaar ah si loo bacrimiyo.
Qorshahoodii hore waxuu ahaa inay dhalaan labo carruur ah oo kala hooyo ah, balse hay’adda ka caawineysay kaalmeynta ayaa u sheegtay inay suuragal tahay inay calool galaan labada ilmood hal mar, waliba hal hooyo uurka ku qaaddo.
Makrii hore waxaa la qaaday ugxan ka dibna waa la qaboojiyay iyada oo markaasi lagu beeray hooyo si kumeel gaar ah loo kireystay, taasi oo gudaha Canada ilmaha caloosha ku qaadeysa.
Sidaasi darteed, labada ilmood ee uurka ku jira waxay ahaanayaan kuwo isku hooyo ah, balse kala aabe ah, waxayna si isku mid ah ugu korayaan caloosha hal hooyo oo lagu magacaabo Meg Stone, oo ah haweeney u dhalatay Canada, taasi oo oggolaatay inay noqoto hooyada kumeelgaarka ah ee carruurta Simon iyo Graeme.
Haatanse labada aabe ee kala ah Simon iyo Graeme waxay dib ugu laabteen UK, iyagoo sugaya in akhbaar uga timaado Canada. Sida uurkan ma haggaagi doonaa? oo ilmuhu si nabad ah maku dhalan doonnaan?
Simon iyo Graeme waxay la socdeen xaalka uur ku jirtooda iyaga oo ka fog, balse waxay dib ugu safreen Canada lix toddobaad ka hor inta ilmuhu aysan dhalan.
Labada aabe way madax adkaayeen waxayna doonayeen inay xiriir la yeeshaan hooyada caloosheeda ilmaha ugu siday, maadaama aysan suuragal u ahayn inay marwalba la joogaan.
Haddaba aabeyaashan ma doonnayaan in carruur kale ay sidaan ku dhalaan?
Inkastoo Simon iyo Graeme ay marwalba farxad u tahay inay carruur helaan balse way adag tahay inay mar kale sidaan sameeyaan.
“Abid ha cusleysan wax walba,” ayuu yiri Simon oo dhoolacaddeynaya